Posted by ဟိန်းထက်အောင် at Wednesday, July 13, 2011
ကျွန်တော် ubuntu ကို သုံးတာသိပ်မကြာသေးပါဘူး.. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပါ. တော်တော်ကောင်းပါတယ်. သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်. ဒါပေမယ့် လူအများစုက Window သုံးရတာကို ပိုပြီးတော့ သဘောကျနေကျပါတယ်. ...အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီး ဘာလို့ ubuntu ကိုမသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း 10 ချက်ကို ပြောပြပါမယ်. ဒါမှ MOTT!S တို့လိုမျိုး ubuntu ကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေက သုံးပါလို့ တိုက်တွန်းလာရင် ပြန်ပြောနိုင်အောင်ပါ :P
၁.မဝယ်ရသေးခင် စမ်းကြည့်တာကို စိတ်မဝင်စားဘူး
၂.ubuntu မှာဆို ဆော့ဖ်ဝဲတွေသွင်းရတာ အရမ်းလွယ်နေတယ်
၃.ubuntuမှာကဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်းအရမ်းနည်း.. လုံခြုံရေးကလည်း အရမ်းကောင်းနေတယ်
Microsoft Office အတွက်ကို $400+ လောက်ပေးရတယ်ဗျာ (သူတို့နိုင်ငံမှာပြောပါတယ်) Openoffice.org က အလကားတဲ့.. ဘာလုပ်မှာလဲ. လူအထင်သေးတာပေါ့နော်.. ဒီပိုက်ဆံတွေကို တစ်ခြားအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေကို ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ပရဟိတအသင်းလေးမှာ (ဒါကတော့ကြော်ငြာဝင်တာပေါ့နော်) လှုလိုက်မဲ့အစား Bill Gate ကိုပဲ ပေးလိုက်တော့မှာပေါ့နော်.. သူလည်း ငွေလိုရှာမှာပေါ့.
အလကားရတာဆို ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးဗျာ.. အလကားရတဲ့ operating system ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့..ကဲ window ဆို စျေးကြီးကြီးပေးလည်းဝယ်ရတယ်... ကိုယ်သွင်းချင်တိုင်းလည်း တွေ့သမျှကွန်ပြူတာကို လိုက်သွင်းလို့မရဘူးနော်.. ကိုယ့်အတွက်သီးသန့်...ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်လဲ...ပြီးတော့ ကိုယ့်window copy ကို genuine ဖြစ်ချင်ရင် activate လုပ် ကိုယ့် personal informationတွေပေး ဒါမှ technical support ရမှာနော်.. ပြီးရင် နှစ်နှစ်တစ်ခါလောက် အပျင်းပြေ ထုတ်နေတဲ့ vista တို့7တို့လို တွေအတွက် ငွေတွေအကုန်ခံလိုက်ဦးပေါ့ဗျာ.. ကောင်းမှကောင်းနော်
ကဲ window မှာသွင်းဖို့ ဆော့ဖ်ဝဲ လိုချင်ပြီဆို ကွန်ပြူတာ အခွေအရောင်းဆိုင်ကိုပြေးရပြီဗျာ.. ဘယ် ဆော့ဖ်ဝဲကို သုံးရင်ပိုကောင်းမလဲ စွတ်စပ်ဝယ်လို့ မရဘူးနော် ဆော့ဖ်ဝဲတွေက စျေးကြီးတယ်ဗျ.. (သူတို့နိုင်ငံမှာနော်) ဒီတော့ microsoft ရဲ့ catalog ကိုဖတ်ကြည့် သူ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ကောင်းကြောင်းညွှန်းထားလိမ့်မယ်ဗျာ အဲဒီကနေမှ Office software တွေ Image Editors တွေ ဘာတွေညာတွေ ၀ယ်ဖို့လုပ်.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က သူတို့ ညွှန်းထားတာကို မကြိုက်ဘူး တစ်ခြားတစ်ခုကို ပိုကြိုက်မိနေလို့ကတော့ ကဲ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆိုင်က အရောင်းဝန်ထမ်းကို သာမေးကြည့်ပေါ့ဗျာ.. သဘောကောင်းတဲ့ ခပ်ချောချောအမကြီးနဲ့ တွေ့ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်.. အပေါက်ဆိုးဆိုး ကွန်ပြူတာအကြောင်း နကန်းတစ်လုံးမသိတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုး အရောင်းစာရေးမနဲ့ တွေ့လို့ကတော့ မထမ ကိုယ့်ကို မကြည်သလို ကြည့် နောက် လေသံမာမာနဲ့ စကားပြော ပြီးရင် မောင်းမထုတ်တာကံကောင်းလို့ ပြောရမှာပဲ..
အဲဒီတော့ Scribus,Nvu,Gimp,Openoffice တွေလို အလကားပဲတင်း လွယ်လွယ်ဒေါင်းလုလုပ်လို့ရနေတဲ့ ဟာတွေကို သုံးမယ့်အစားတော့ ဘတ်စ်ကားကို ကျပ်ကျပ်ညပ်ညပ်တိုးစီးပြီးတော့ပဲ အခွေဆိုင်တွေမှာ window ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ပြေးဝယ်တော့မှာပေါ့ဗျာ..
ကဲ IRC က #Ubuntu မှာ ubuntu users ၁၃၀၀ လောက် က ကိုယ်မေးသမျှကိုဖြေဖို့အတွက် စောင့်နေကြတယ်ဗျာ.. ပြီးတော့ http://help.ubuntu.com မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး.. Help Document တွေက အကြောင်းအရာစုံ Up-to-date တွေချည်းပဲဗျာ.. Open source ဖြစ်တဲ့အတွက် bug တစ်ခုခုပါရင် လူတိုင်းပြင်နိုင်တယ်( လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ပညာရှင်တိုင်းပေ ါ့ :P) window မှာလို ကိုယ်တစ်ခုခု error ဖြစ်ပြီဆို ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိနဲ့ microsoft ပဲ ဖုန်းလှမ်းဆက်ရတော့မလိုလို ဖြစ်မနေရတော့ဘူးဗျာ.... မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး အဖြေကိုသိနိုင်သွားရော.. ဒါဆို ကွန်ပြူတာဆိုတာ လျှို့ဝှက်ချက်မရှိတော့သလိုဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ မကောင်းသေးပါဘူးနော်..
rotating desktop တွေ desktop transparency effect တွေ အရမ်းမိုက်တဲ့ တစ်ခြားeffect တွေ အဲဲဒါတွေ မသုံးပါနဲ့ဗျာ တော်ကြာ သူများတွေက ကိုယ့်် desktop လေးကိုကြည့်ပြီး သိပ်အလှပြချင်တဲ့ ကောင်လို့ထင်နေပါဦးမယ်
window vista လေးသုံးပြီး ရိုးရိုးနေတာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာ
ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်တယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော် ကိုယ့်ဟာကို GUI လေးနဲ့ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျော်ပျော်ပါးပါးသုံးတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား..
.တော်ကြာ မသုံးတတ်သုံးတတ်နဲ့ command တွေလျှောက်ရိုက်နေလို့ ကွန်ပြူတာလေးပျက်သွားပါဦးမယ် .. ﻿
Empathy Chat Box Themes
Theme for ubuntu 11.04
Keyboard Icon to Custon icon From The Panel